नेपालमा प्राकृतिक विपद्ध : पाँच महिनामा १८३ जनाको मृत्यु, ४४ बेपत्ता – Mission Khabar
#मन्त्री प्रेम आले
#पशुपति धर्मशाला लिज
नेपालमा प्राकृतिक विपद्ध : पाँच महिनामा १८३ जनाको मृत्यु, ४४ बेपत्ता
मिसन खबर १३ भाद्र २०७८, आईतवार १८:४०
काठमाडौं । अविरल वर्षाको कारण देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढीपहिरो र डुबानमा परी गत जेठ ३० गतेदेखि शनिबार साँझसम्म ९४ जनाको मृत्यु भएको छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार मृत्यु हुनेहरूमा ४८ जना पुरुष, २३ जना महिला, ११ जना बालक र १२ जना बालिका रहेका छन् । बाढी पहिरो र डुबानमा परी यो अवधिमा १ सय १६ जना घाइते भएका छन् ।
बाढीपहिरोमा परी २८ जना बेपत्ता भएका छन् । तीमध्ये १७ जना पुरुष, ६ जना महिला, ४ जना बालक र १ जना बालिका रहेका छन् । बेपत्ताको खोजी कार्य जारी छ । बाढी पहिरोमा परेका १ हजार २ सय ७५ जनाको विभिन्न ठाउँबाट उद्दार गरिएको छ भने उनीहरुलाई तत्कालै उपचारको व्यवस्था मिलाइएको जनाइएको छ । साँढे दुई महिनाको बाढीबाट ३ हजार १ सय ८० वटा घर डुबानमा परेका छन् । ९ सय वटा घर, १ सय ५३ वटा गोठ, ६० वटा पुल, ८ वटा विद्यालय र १४ वटा सरकारी कार्यालयमा क्षति पुगेको छ भने १ हजार ८७ वटा पशु चौपायाको मृत्यु भएको छ । उक्त अवधिमा भएका जम्मा १ हजार १ सय ३० वटा विपद्को घटनाबाट १ हजार २ सय ९ वटा घर परिवारका ५ हजार ९ सय २४ जना मानिस विस्थापित भएका छन् ।
प्रभावित स्थानहरुमा भएको क्षति न्यूनीकरण र उद्दारमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी कर्मचारीहरुले सक्रिय रुपमा क्रियाशिल भएको बताइएको छ । बाढी पहिरोको जोखिममा रहेका विभिन्न जिल्लाका विभिन्न घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने, पहिरोमा पुरिएका धनमाल निकालेर सुरक्षा गर्ने काम समेत विभिन्न निकाय र स्थानीयवासीको समन्वय र सहयोगमा प्रहरीले बिगतदेखी गर्दै आएको छ ।
पाँच महिनामा प्राकृतिक विपद्धबाट १८३ को मृत्यु
देशभर विगत पाँच महिनामा प्राकृति विपद्का घटनामा १८३ जनाको मृत्यु भएको छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार गत वैशाख यता शनिबार रातिसम्म देशभर विपद्का १५४१ घटना भएका छन् । ४४ जना बेपत्ता छन् । ४ सय ६ जना घाइते भएका छन् । विपद्का घटनाबाट १ हजार ९ सय ६८ घरपरिवार प्रभावित बनेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार यी घटनाबाट ९१ करोड ६२ लाख ८ हजार ३४२ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।
कुनकुन विपद्धबाट कतिको मृत्यु ?
यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै पहिरोमा परी ४८ जनाको मृत्यु भएको छ । यस्तै चट्यांमा परी ४२ जनाको, बाढीका कारण ३१ जनाको, सर्पदंशबाट १५ जनाको, जंगली जनावरको आक्रमणमा २० जनाले मृत्यु भएको छ ।
पशुपति धर्मशालाको सम्झौता रद्ध गर्न सिफारिस, के गर्लान त अव…
सोमबार एकैदिन ६ हजार ७३४ जनामा कोरोना संक्रमण, काठमाडौं उपत्यकामा…
सिंहदरबारमा कोरोना भाइरसको त्रास, चार सचिवसहित सय बढी कर्मचारी संक्रमित
१पशुपति धर्मशालाको सम्झौता रद्ध गर्न सिफारिस, के गर्लान त अव आनन्दराज बतास ?
२सोमबार एकैदिन ६ हजार ७३४ जनामा कोरोना संक्रमण, काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ३९३९ थपिए
३सिंहदरबारमा कोरोना भाइरसको त्रास, चार सचिवसहित सय बढी कर्मचारी संक्रमित
४बाक्लो हुस्सु, कुहिरोसँगै बढेको चिसोले तराईको जनजीवन प्रभावित, अन्य स्थानमा समेत मौसम बदली
५अब कोरोनाको लक्षण देखिएमा ५ दिन अनिवार्य क्वारेन्टीन, यस्तो छ सरकारी आदेश